1Russian XBIT, Unkampani N. V. Inkampani1X Corp. kwaye ilayisensi eCuraçao. Ngaba injongo yakho? Ukoyisa umhlaba kwimidlalo ye-intanethi. Njani?? Ngeyona ntengiso inkulu ikhathalogu kwaye enokubakho ngamanqaku ebhonasi kunathi (kwaye bona) zange yabonwa. Kwaye sithetha ngebhonasi eyamkelekileyo […]
uthungelwano olukhulu lweparis Unibet Casino Unibet uluntu olwahluleleneyo. Kwaye ilayisensi esekwe eMalta (I-SMG), Inkampani yase-Holy inezinye zeyona midlalo mihle ye-yekhasino ye-intanethi, kuba isebenzisa ezintathu zesoftware ehamba phambili njengeNet Entertainment, Microgaming o Yggdrasil. Kodwa umthwalo we-NetEnt ungaphezulu kweekota ezintathu […]
Xa uBwin, naphantsi kwegama elidala uBetandwin, Uzalelwe eVienna ngaphakathi 1998, Akukho namnye unokuyixela indlela yempumelelo. Ngaphezulu koku 22 izigidi zabathengi batyale imali kwimidlalo yabo, oye waba ngomnye wabadlali abakhokelayo kwihlabathi liphela kumdlalo wamazwe aphesheya. Nangona imbeko iqinisekileyo […]
Emva 888sport kunye logo, iqela elidumileyo le 888 Holdings PLC. Isuka 2008, Inkampani ibonelela nge-poker kunye nekhasino kunye nokubheja kwezemidlalo. I-brand ifumene ngokukhawuleza igama njenge-paris yekhaya ehloniphayo kunye nenomdla. Ekuhlaziyeni kwethu, siya kumlandela ngokusondeleyo umqhubi kwimicimbi ephambili yolawulo […]
Ukuba amagama amakhulu kwimizi mveliso yezemidlalo eParis, abanakukhetha ngaphandle kwaye abanikezeli bencoko kwi-intanethi Betfair.Le yiNgilane, I-Paris Stock Exchange yamkelwe yinkqubo. Apha ngezantsi, Makhe sihlolisise ezemidlalo kuwo onke amabakala afanelekileyo. Yeyona nto iphambili kuthi? Ithembekile inikezela iParis? Ngaba ikhona ibhonasi […]
Nangona amava osisityebi, uphawu lufumaneka eSpain kwinyanga ephelileyo. Kwilizwe lethu, kuvunywe liCandelo eliBanzi loNgcakazo (OTHIXO) sisiphelo sedatha, ke siyathemba ukhuseleko lweqonga. Uhlobo lweMidlalo oluthandwe ngabaseSpain kwaye nokuba lolonwaba ngakumbi eParis luyakwazi ukulungelelanisa […]
Ukudlala indima entle ngakumbi ekhaya yinto eyaziwa ngumntu wonke, kodwa kuyinyani nokuba imeko ekhasino iyanyamalala. Kodwa kutheni kufuneka silinde impelaveki ukuba siye ekhasino kwaye siwonwabele umdlalo? Yile nto inkampani yesekisi, yeyiphi […]
I-Interwetten ngomnye wababoneleli bezemidlalo abakhokelayo eYurophu. Inkampani yase-Austrian yasungulwa ngaphakathi 1990 por Wolfgang Fabian; ngelo xesha njengomfundi wezoqoqosho, oosomashishini abancinci abaye baba nesibindi sokungena kushishino lokudlala. In 1996, Ndaye kwi-Intanethi ndaqala eyokuqala eParis. […]
A medida que desarrollamos nuevas tecnologías, la adaptación Luckia puede ir a su sitio web para lograr lo que es hoy. Kubalulekile ukuba iinkampani ziqhelanise nabasebenzisi ngazo zonke iintlobo zotshintsho ukwenza amava abo emidlalo apheleleyo njengoko kunokwenzeka.. Kwakhona, umdlalo kwigumbi lomdlalo, igumbi […]
Ukuba uya kwiwebhusayithi yabo, kungekudala uza kubona ukuba kuninzi okunomthunzi kunye notywala obuninzi, izinto ezimbini ezisisiseko zayo nayiphi na umdlali ofuna ukonwabela iseshini yomdlalo. Injongo yale ndawo kukubonelela ngeenkonzo ezilungileyo kubadlali kwaye zikhululekile kuzo 5 iminyaka yamava kolu shishino […]